Diyaaradaha dagaalka Israa’iil oo duqeyn xoogan ka bilaabay magaalada Gaza
Milatariga Israel ayaa sheegay in duqeyn diyaaradeed oo hor leh ay ka geesteen magaalada Gaza laba maalin kadib markii lagu dhawaaqay xabad Joojin labada Dhinac. Taliska milatariga ayaa sheegay in aysan duqeyn bartilmaameedyada ururka Islaamic Jihaad, balse ay beegsadeen saldhigyo ay ku sugnaayeen garabka hubeysan ee Xamaas. Dhanka kale ma jiro wax war ah oo […] The post Diyaaradaha dagaalka Israa’iil oo duqeyn xoogan ka bilaabay magaalada Gaza appeared first on Horseed Media...
Milatariga Israel ayaa sheegay in duqeyn diyaaradeed oo hor leh ay ka geesteen magaalada Gaza laba maalin kadib markii lagu dhawaaqay xabad Joojin labada Dhinac. Taliska milatariga ayaa sheegay in aysan duqeyn bartilmaameedyada ururka Islaamic Jihaad, balse ay beegsadeen saldhigyo ay ku sugnaayeen garabka hubeysan ee Xamaas. Dhanka kale ma jiro wax war ah oo [&#8230;] The post Diyaaradaha dagaalka Israa&#8217;iil oo duqeyn xoogan ka bilaabay magaalada Gaza appeared first on Horseed Media...
Milatariga Israel ayaa sheegay in duqeyn diyaaradeed oo hor leh ay ka geesteen magaalada Gaza laba maalin kadib markii lagu dhawaaqay xabad Joojin labada Dhinac. Taliska milatariga ayaa sheegay in aysan duqeyn bartilmaameedyada ururka Islaamic Jihaad, balse ay beegsadeen saldhigyo ay ku sugnaayeen garabka hubeysan ee Xamaas. Dhanka kale ma jiro wax war ah oo […] The post Diyaaradaha dagaalka Israa’iil oo duqeyn xoogan ka bilaabay magaalada Gaza appeared first on Horseed Media • Somali News.
Milatariga Israel ayaa sheegay in duqeyn diyaaradeed oo hor leh ay ka geesteen magaalada Gaza laba maalin kadib markii lagu dhawaaqay xabad Joojin labada Dhinac. Taliska milatariga ayaa sheegay in aysan duqeyn bartilmaameedyada ururka Islaamic Jihaad, balse ay beegsadeen saldhigyo ay ku sugnaayeen garabka hubeysan ee Xamaas. Dhanka kale ma jiro wax war ah oo [&#8230;] The post Diyaaradaha dagaalka Israa&#8217;iil oo duqeyn xoogan ka bilaabay magaalada Gaza appeared first on Horseed Media • Somali News.